गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने? यस्ता छन् पाँच उपाय | Safal Khabar
विहीबार, २२ बैशाख २०७९, ११ : २३
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता गर्मी बढिरहेको छ। तापक्रम वृद्धिको असर मानिसको स्वास्थ्यमा पनि देखिन थालेको छ। डिहाइड्रेसन, पाचनप्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या, छालामा हुने सनबर्नजस्ता मौसमी स्वास्थ्य समस्याहरु यो बेला देखिन्छन्। यस्तोमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने? यस्ता छन् केही उपाय:
#गर्मीबाट हुने स्वास्थ्य समस्याबाट कसरी बँच्ने? यस्ता छन् पाँच उपाय
माओवादी केन्द्रले गठन गर्‍यो १२५ सदस्यीय पोलिटब्युरो
पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भागवंत मान विवाह बन्धनमा बाँधिए